Na nso infrared dyes
Near infrared dyes egosi ìhè absorption na nso infrared nso nke 700-2000 nm. Mmetụta ha na-ekpo ọkụ na-esitekarị na nnyefe ego nke ihe e ji esiji ákwà ma ọ bụ ihe e ji ígwè rụọ. Akụrụngwa nke dị nso nke infrared gụnyere dyan dyes nwere ogologo polymethine, dthalocyanine dyes ...
UV fluorescent nche pigments
Mgbe n'okpuru ìhè a na-ahụ anya, UV ntụ ntụ na-acha ọcha ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-ahụ anya, na-enwe obi ụtọ na ntụgharị dịgasị iche iche (254nm, 365 nm) na-egosi otu ma ọ bụ karịa agba ọkụ, Isi ọrụ bụ igbochi ndị ọzọ ịgha ụgha. Ọ bụ ụdị nke pigmenti na elu na nkà na ụzụ, na ezi na agba zoro ezo ....
Anyị isi ngwaahịa na-agụnye photochromic ink, thermochromic ink, UV fluorescent ink, pearl ink, mukee na ọchịchịrị ink, ngwa anya nnyonye anya agbanwe ink, ha na-ewu ewu na-eji na mkpuchi, ink, plastic, ágbá, na ịchọ mma ụlọ ọrụ. Anyị na-enye na ahaziri ndị a dai na pi ...